Mass meeting for Nepali Community Center
ग्रेटर अस्टिन नेपाली सामुदायिक केन्द्र निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्ने उद्देश्यले आयोजित भेलामा उपस्थित हुन तपाई सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । उक्त कार्यक्रममा यस सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण प्रगति र योजनाहरु उपर छलफल गरिनेछ । सामुदायिक केन्द्र हामी सबैको साझा आवश्यकता, साझा चासो र सरोकार साथै साझा गौरव र साझा सहभागिताको विषय हो । हामी यस कुराले मात्र पनि धेरै नैं उत्साही भएकाछौं । आउनुस् हामी सबै मिलेर यस महान कार्यलाई सम्पन्न गरौं । Sunday, August 12, 2018 2:30PM Pflugerville Library, 1008 Pfluger St W, Pflugerville, TX 78660
Top3Programs of February
यसै महिना ग्रेटर अस्टिन क्षेत्रमा हुन लागेका निम्न ३ महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु कुनैं पनि छुटाउन लायक छैनन् । सबैलाई उपस्थितिका लागी हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । (१) नेपाल आइडल लाइभ कन्सर्ट Tomorrow February 14, 6:30pm (Valentine Day) Asian American Resource Center, 8401 Cameron Rd, Austin, TX 78754 (२) एनआरएन अमेरिकाको हेल्प डेस्क महामहिम राजदूत डा. अर्जुन कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन कार्यक्रम Date: February 17 Saturday at 12 to 4pm The Bungalows Hotel & Event Center, 1000 S Bell Blvd, Cedar Park, TX 78613 (३) स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जागरण कार्यक्रम सारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य र आत्म सुरक्षाका बिषयमा बिशेषज्ञहरु द्वारा प्रशिक्षण Sunday February 25, 2018 at 2pm Wells Branch MUD Recreation Center, 3000 Shoreline Dr, Austin, TX 78728
GANS General Assembly
GANS general assembly meeting, 21 January 2018. Details will be published soon .......
GANS Nepali School Summer Camp Closing Ceremony
ग्यान्स नेपाली पाठशाला समर कक्षा समापन कार्यक्रम आउदो आईतवार, अगष्ट १३, ३ बजेदेखि फ्लुगरभिल लाईब्रेरीमा.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ हरेक शनिवार एशियन अमेरिकन रिशोर्स सेन्टरमा समर केम्पको रुपमा नेपाली भाषा, संस्क्रिती, साहित्य र योगा संचालन गर्दै आएका थियौं । यसमा अभिभावक र बिद्यार्थी सँगै सामेल भयौं । हाम्रा छोराछोरी संगसँगै हामी आफैं पनि कसरी स्व-अनुशासित (self-disciplined) हुन सक्छौं भन्ने बिषयमा गरिएको यो स्यानो प्रयास मात्र थियो । यसको समापन कार्यक्रममा नियमित बिद्यार्थीहरु मात्र हैन सबै बिद्यार्थी तथा अभिभावकज्यूहरु उपस्थित भएर यसको समीक्षा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । Sunday, August 13th, 3:00PM Pflugerville Public Library 1008 Pfluger St W, Pflugerville, TX 78660